Casemiro oo taariikh cajiib ah ka sameyn doono kulanka horyaalka La Liga ay maanta kula ciyaari doonaan kooxda Levante – Gool FM
(Real Madrid) 20 Okt 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Real Madrid Casemiro ayaa ciyaari doono kulankiisii 100-aad ee horyaalka La Liga dalka Spain, hadii uu qeyb ka noqdo kulanka ay maanta kusoo dhaweyn doonaan kooxda Levante garoonka Santiago Bernabeu.
Laacibka reer Brazil ayaa gaari doona kulankiisii 100-aad ee horyaalka La Liga. Wuxuu heystaa 99 kulan, wuxuu guul soo gaaray 73 kulan, 13 barbaro iyo 13 guuldarooyin.
Cel celis ahaan guulaha ay uu kooxda Real Madrid la gaaray ayaa lagu qiyaasay 73.7%, gaar ahaan kulamada horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Casemiro ayaa kula guuleestay kooxda Real Madrid 1 jeer ee ah horyaalka La Liga, waana xili ciyaareedkii 2016/2017, xiligaas uu macalka reer France ee Zidane sugnaa garoonka Santiago Bernabeu.
Inkastoo uu Casemiro hal jeer kula guuleestay horyaalka La Liga kooxda Real Madrid, hadana tartanka Champions League ayaa ah kan ugu badan uu la qaaday, wuxuuna kula guuleestay 4 xili ciyaareed ee kala ah (2014, 2016, 2017 iyo 2018).
“Uma dabaal dagi doono si waali ah, sababa la xiriira ixtiraam aan u hayo jamaahiirta kooxda Chelsea” - Jose Mourinho